‘मेरो सरकार’ ले ओली-प्रचण्डको पार्टीभित्र विद्रोह, फेरी खुल्यो अर्को रहस्य — Sanchar Kendra
‘मेरो सरकार’ ले ओली-प्रचण्डको पार्टीभित्र विद्रोह, फेरी खुल्यो अर्को रहस्य
काठमाडौं । नीति तथा कार्यक्रममा ‘मेरो सरकार’ शब्दावलीको प्रयोगलाई लिएर शनिबार सत्तारुढ पार्टीको संसदीय दलको बैठकमा केहीबेर लफडा भयो । सांसदहरुले केपी ओलीलगायतको नेतृत्व मण्डलीले हुकुमी शैली अपनाएको भन्दै बैठकमा गुनासो गरे ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको छलफलमा भाग लिन रोकेर निरंकुशता चरित्र देखाएको भनेर केही सांसदहरूले विद्रोह समेत गरेका छन् ।
संसदमा पेश भइसकेको नीति तथा कार्यक्रममा भाग लिएर टिप्पणी गर्न पाउनुपर्ने नेकपाका केही सांसदहरूको माग छ । उनीहरूले आफ्नो गाउँ ठाउँ र योजनाहरूका बारेमा छलफलमा भाग लिएर धारणा राख्न पाउनुपर्ने जनाएका छन् ।
पार्टी अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी ओली, दोस्रो अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्बाङले समय नभएको भन्दै सांसदहरूलाई छलफलमा रोक लगाएका छन् । संसदीय दलको शनिबारको बैठकमा सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रममा प्रयोग भएका भाषा र तथ्यांकबारे छलफल गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका थिए ।
छलफलमा भाग लिन नपाएपनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि हुने मतदानमा समर्थन जनाउन सांसदहरूलाई निर्देशन दिइएको छ । प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमणका कारण छलफलका लागि समय नरहेको उपनेता नेम्बाङले आफ्ना सांसदहरूलाई जानकारी गराएका थिए । वैशाख २४ गतेपछि दलको बैठक बोलाइने जानकारी दिइएको छ ।
राष्ट्रपतिबाट ‘मेरो सरकार’ भनी नीति तथा कार्यक्रममा भएको सम्बोधन र केही तथ्यांकबारे सरकारका तर्फबाट स्पष्ट पार्नुपर्ने, छलफलका लागि समय दिनुपर्ने माग सांसदहरूको रहे पनि सुनुवाई भएको छैन । नेकपाकी सांसद रामकुमारी झाँक्रीले राष्ट्रपतिले प्रयोग गरेको ‘मेरो सरकार’को भाषाशैलीको आलोचना गरेकी छिन् ।
झाँक्रीले आपत्ति जनाउदै बैठकमा भनिन्– ‘उपनेताको कुरा सुन्दाखेरि नीति कार्यक्रम पास गरिसकेर प्रधानमन्त्री कम्बोडियामा भएका बेलामा दलको बैठक बस्ने भन्ने सुनियो, यस्तो छलफल त अन्त पनि गर्न सकिन्छ । नीति कार्यक्रमकै विषयमा हाम्रा कतिपय असहमतिहरु छन् । हाउसमा आफ्नो कुरा त गर्छौं नै, संसदीय दलमा छलफल गर्ने वातावरण नबनाउने यो कुन तरिका हो ? राष्ट्रपतिलाई ड्राफ्ट गरेर बुझाएको नीति तथा कार्यक्रमको शब्दावलीप्रति हाम्रो आपत्ति छ ।’
अर्का सांसद सुुरेन्द्र पाण्डेले आक्रोशित हुँदै भने– ‘२४ गते नीति कार्यक्रम पास गर्ने ह्वीप छ भनेर म्यासेज पठाएको भए हुन्थ्यो, किन यो बैठक राखेको ? यो पार्लियामेन्ट्री कमिटी हो, तपाईहरुले सुनाउने, हामीले सुन्ने ? तपाईहरुका मात्रै कुरा सुन्न हामीलाई बोलाएको हो ? पारितै गर्दिनुपर्ने हो भने पार्टीको सरकार छ, पास गरिदिउँला । तर, छलफल गर्न त दिनु परो नि ।’
तर, सांसदहरुले हुँदैन र छलफल गरिनुपर्छ भन्दाभन्दै नेकपा संसदीय दलको शनिकारको बैठक नेताहरुको भाषणबाजीपछि विना निश्कर्ष सकिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले नीति तथा कार्यक्रमको विपक्षीबाट विरोध हुन थालेको भन्दै बचाउ गर्न र समर्थन जनाउन सांसदहरूलाई निर्देशन दिएका छन् ।
साथै आफ्नो पार्टीका नेता कार्यकर्ताले समेत राष्ट्रपतिले प्रयोग गरेको ‘मेराे सरकार’ भाषाको बिरोध गर्न लागेको भन्दै त्यसो नगर्न निर्देशन दिएका छन् । नीति कार्यक्रम पारित गरिसकेपछि २५ र २६ गते सबै सांसदलाई बोल्न दिने गरी नेकपा संसदीय दलको बैठक राखिएको छ । जबकि त्यसबेला प्रधानमन्त्री केपी ओली भियतनाम र कम्बोडियाको भ्रमणमा जाने छन् ।
मेरो सरकारबारे खुल्यो अर्को रहस्य
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार संसदमा प्रस्तुत गरेको २६ पृष्ठ लामो सरकारको नीति तथा कार्यक्रम त्यहाँ प्रस्तुत हुनुअगावै नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले समेत पढेका रहेछन् । तर, प्रचण्डले पढ्दा त्यहाँ ‘मेरो सरकार’ लेखिएको थिएन ।
दलको बैठकमा प्रचण्डको भनाइलाई उधृत गर्दै एक सांसदले भने, ‘संसदमा राष्ट्रपतिले वाचन गर्नुअघि प्रचण्डजीले नीति तथा कार्यक्रम पढेको तर, आफूले पढ्दा त्यहाँ मेरो सरकार नलेखिएको बताउनुभयो ।’
‘मैले पढ्दाखेरि त्यहाँ कतै पनि मेरो सरकार लेखिएको थिएन, पछि घुसेछ,’ प्रचण्डले बैठकमा यसो भन्दै गर्दा अर्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओली फुत्त बैठक कक्षमा प्रवेश गरे । ओली आउनासाथ प्रचण्डले भने, ‘बाँकी के कसो भएको हो, प्रधानमन्त्रीजी पनि आउनुभयो, थप कुरा उहाँले नै बताउनुहुनेछ ।’